Ukuphupha kweSchloss Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Igama "ukukhiya" linokuba neentsingiselo ezininzi. Kwelinye icala, eli gama linokubhekisela kwisakhiwo esihle. Kwelinye icala, iqhaga linokuba sisifinyezo sesixhobo esitshixwayo, umzekelo isitshixo sokutshixa okanye uvalelo. Unokucinga kwakhona ngesivakalisi: «Tshixa umntu.
Ke ngoko, kubalulekile ukwahlula phakathi kweentsingiselo ezahlukeneyo xa utolika amaphupha. Ke, zibuze ukuba loluphi uhlobo lwenqaba oyibonileyo ephupheni lakho. Ngaba yayisisakhiwo okanye isitshixo? Mhlawumbi usibonile isitshixo esihambelanayo?
1 Uphawu lwephupha «ukuvalela» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukuvalela» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isitshixo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukuvalela» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kuyakutolika oku Isakhiwo senqaba ngokubhekisele kwi Ikratshi okanye amampunge amaphupha. Ngokukodwa ukuba iphupha lihlala kwinqaba kwiphupha lakho, kuya kufuneka uqaphele ukuzidla kwakho el mundo yomlindo.
Nangona kunjalo, ukuba ubona inqaba kuphela ngaphandle ephupheni, inokuba ngumzuzu ophumelelayo wephupha. mpe mbelelo isiqingatha. Iphedi endala okanye edityaniswe newayini njengophawu lwephupha ubiza iphupha ukuba lingazibandakanyi neprojekthi engafunekiyo. Ngapha koko, imisebenzi yayo yeshishini izakuwohloka kungekudala.
Ukuba inqaba yamaphupha isondele, ihlala ibonisa inkqubela phambili kwezentlalo. Inqaba ekude ephupheni ikwalumkisa ngokuchasene nokuzikhukhumalisa okungaphaya.
Ukuba iphupha lihlala kwinqaba ephupheni lakho, mhlawumbi uyayithanda isilingi, ngokubanzi uqikelele ngokwaneleyo kwihlabathi elivukayo. oluphakathi kwezemaliukumila ubomi bakho ngokweminqweno yakho. Ukuba iphupha lundwendwe nje kwinqaba ephupheni, ungalindela umxhasi onobuhlobo nonempembelelo kubomi bokuvuka. Ukuba ubona isikrweqe kutyelelo lwakho, uhlala ufuna ukuzikhusela kwinto ethile kwilizwe labalindi.
Ukushiya inqaba njengophawu lwephupha kutolika ukutolikwa ngokubanzi kwephupha njengophawu lokuba iphupha liza kuphulukana nakho konke ukuchuma kwalo okanye ukuba umntu osondeleyo kulo uya kufa.
Los Tshixa ucango okanye ukungena njengophawu lwephupha ufuna ukwazisa umntu ophuphayo, ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha, ukuba makayeke yonke into kwihlabathi lokuvuka athe wazivalela kulo. Ukuba iphupha liphula iqhaga kwiphupha lakho, kuya kufuneka ubonakalise ekuhleni iimvakalelo zakho kunye nezimvo zakho ebomini bokuvuka. Kungenxa yokuba ukuba uyaqhubeka nokuzibandakanya kuwe, ngekhe ube nakho ukuqhubekeka nokuzibamba.
Isitshixo somnyango ephupheni sinokuvulwa kwakhona. Imiqobo bhekisa, nangona kunjalo, inokulawulwa ngengcinga efanelekileyo kunye neendlela ezifanelekileyo.
Uphawu lwephupha «ukuvalela» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokuqwalaselwa kwengqondo kwesimboli yephupha "yokutshixa" umntu ufumanisa ukuba olu luphawu Indawo yomphefumlo yokuphupha. Ukuphupha kuyazivalela kwilizwe lokuvuka kwaye kuyinyani kwaye bafuna ukubona ukuba kuthanda ntoni. Nangona kunjalo, akufuneki unamathele kule ndlela yokuziphatha yexesha elide. Kuba le lahleko yenyani iyakudlala ngokuchasene nawe.
Ngamanye amaxesha inqaba njengophawu lwamaphupha ikwabhekisa kwikratshi nokungamampunge kwamaphupha, ngakumbi ukuba inqaba yamaphupha inendlela enkulu ebanzi.
Inqaba kwintaba ephezulu ephupheni kufanele ukuba ikwenze uqonde ngokwasemphefumlweni ukuba injongo ebekiweyo ebomini bokuvuka inokufezekiswa kuphela emva komzamo omkhulu. Rhoqo inqaba ibonisa enye ephupheni. Umama tatangakumbi xa iindonga ezomeleleyo, ezikhuselayo zingaphambili.
Ukutshixwa komnyango njengophawu lwephupha kufuna ukuba abantu bazi, ngokwenkcazo yengqondo yephupha, ukuba umntu womelezwe kwihlabathi elivukayo. Uxinzelelo Iyavezwa. Ezi zivakalelwa njengeebhloko zangaphakathi. Ke ngoko, iphupha liyacelwa liphupha lakho ukunciphisa okanye ukuqhubekeka le ngxaki. Kuba kulapho kuphela apho uya kuba nakho ukubuyisela impilo yakho elungileyo.
Ukuba umphuphi wayefuna ukutshixa umnyango ephupheni, uya kuboniswa kwakhona ukuba ukhuseleko lwakhe ekuvuseni ubomi lusongelwa.
Uphawu lwephupha «isitshixo» - ukutolika kokomoya
Ngokwasemoyeni ukubona isitshixo somnyango njengophawu lwephupha kunokubonisa ukuba iphupha liyayamkela inyani entsha okanye ukuba yayo Indlela ivaliwe yi. Isitshixo ephupheni sisetyenziswa njengomfuziselo woko. ingqibelelo yokomoya yamaphupha atolikwa.